Saafi Films - News: Da� dhexaadka muqdisho oo ku mashquulay ciyaarta dubnada (Warbixin)
Da� dhexaadka muqdisho oo ku mashquulay ciyaarta dubnada (Warbixin)
Meelaha ugu waa weyn ee magaalada muqdisho ayaa waxa lagu arki jiray dadweyne farabadan oo iyagu ka sheekeysanaya siyaasada waddanka hadba dhinaca markaasi loo hadal heynta badnaa maxaase hadda badalay?
Kormeer aan ku tagnay maqaaxiyadaha muqdisho ayaa waxa kula kulanay dhalinyaro da�dhexaadka ku jira kuwaasi oo ka sheekeynta siyaasada ubadalay ciyaarista Dubnada oo xiiso gooni ah iyadu ku heysa.
Qaar ka mid ah dhalinyarada oo lahadlay saxafada ayaa sheegay in ay ku doorteen ciyaartaan maadaama aysan ka hadlin karin siyaasada qofkii ka hadlana (Silenta) la saarayo sida ay yiraahdeen.
�Aniga kula hadlaya waxaan ka mid ahay dhalinyarada Xamar weyne ku dhaqan,waxaan aad ujeclahay ciyaarta Dubnada sidaa awgeed iyada ayaa iga wanaagsan siyaasada waxaa sidaa yiri wiil dhalinyaro ah�.
Mudooyinkii dambe waxaa soo badanayey dadka ciyaara dubnada,Turubka iyo Jarta oo ay odayaashu ciyaaraan taasi oo noqotay ciyaar ku kooban qofka siyaasadoodana ay taasi noqotay.
Ciyaarta Dubnada ayaa ah mid ay dhalinyaradu aad uxiiseyaan gaar ahaan kuwa da�dhexaadka ah waxaana maqaaxiyadaha muqdisho kusoo badanaya dadka ciyaaraya dubnada.
Sikastaba ha�ahaatee Caasimada Somaliya ee Muqdisho waxaa ay soo martay marxalado kala duwan waxaana jiray in maqaayadaha lagu qaxweeyo ay waqti ahayd meel xitaa shaaha laga cabi jiray markii maamuladii jiray ay mamnuuceen.
4,555,907 unique visits